खुट्टा निदाउँदा आखिर किन यस्तो हुन्छ ? जानी राखौँ – Etajakhabar
खुट्टा निदाउँदा आखिर किन यस्तो हुन्छ ? जानी राखौँ
ताजा खबर :- प्रायजसो मानिसले कुनै न कुनै बेला खुट्टा निदाएको अनुभव गरेका हुन्छन् । खुट्टा निदाउँदा एकछिन त निकै पीडा हुन्छ । उभिन र हिड्न पनि सकिदैंन । आखिर किन यस्तो हुन्छ रु हामी सोच्छौं खुट्टामा पर्याप्त मात्रामा रक्तसन्चार नभएका कारण निदाउने हुन्छ । तर यसो नभई खुट्टा नसाका कारण निदाउँछ ।
यसमा दबाब पर्दा मष्तिष्कसम्म नसाले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन या रक्तसन्चार गर्न सक्दैन र दिमागसम्म उक्त अंगको बारेमा पुग्ने जानकारी रगत या अक्सिजन अभावमा अवरुद्ध हुन्छ । यही कारण त्यहाँ संवेदना महसुस हुँदैंन र त्यो अंग निदाउँछ । पछि उक्त अंगमा दबाब हट्दा पुनः
रगत या अक्सिजन सन्चार नियमित हुन्छ र अंग पुनः संवेदनशिल हुन्छ । यसरी हात या खुट्टा निदाउँदा शरीरमा कुनै चोट पुग्दैन । तर केही समयमा लागि अनौठो महसुस हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन १०, २०७३ समय: १२:४९:२६
सन्दिप, सोमपाल र ज्ञानेन्द्र आइसिसि एकदिवसीय बरियतामा परे, कुन खेलाडी कतिऔं नम्बरमा ?
काठमाडौं बसपार्कवाट फेरी अर्का बालक ‘अपहरण’